यी ३ कारण : जसले गर्दा केकेआरसँग हार्‍यो विराटको टिम
By क्रिकेट पाटी	 On अशोज २६, २०७८
काठमाडौंः आईपीएलको एलिमिनेटर खेलमा केकेआरसँग आरसीबी ४ विकेटले पराजित भयो। महत्वपूर्ण खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरले टस जितेर पहिले ब्याटि गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बैंग्लोरले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १३८ को स्कोर मात्र बनाउन सकेको थियो। कोलकाता नाइट राइडर्सले दुई बल बाँकी रहँदै ६ विकेट गुमाएर यो स्कोर हासिल गरेको हो।
आरसीबीको यो हारसंगै उनको आईपीएल २०२१ को यात्रा पनि समाप्त भयो। टिम एक पटक फेरि आईपीएलको उपाधि जित्न असफल भयो। कप्तानको रूपमा विराट कोहलीको अन्तिम आईपीएल खेल पनि थियो। अब उनी आईपीएलमा एक खेलाडीको रूपमा मात्र खेल्नेछन्।
केकेआरसँग आरसीबी हार्नुका ३ कारण
३. आरसीबीको मध्यक्रमको खराब प्रदर्शन
विराट कोहलीले टस जितेर पहिले ब्याटि तय गर्ने निर्णय गरेर टिमका ओपनरहरुले यो निर्णय सही साबित गरे। कप्तान विराट कोहलीले ३३ बलमा ३९ र देवदत्त पडिक्कल १८ बलमा २१ रन बनाए।
पहिलो विकेटका लागि ५.१ ओभरमा ४९ रन जोडे। राम्रो सुरुवातपछि आरसीबीको टिमले ठूलो स्कोर बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, त्यस्तो हुन सकेन्।
आरसीबीको मध्यक्रम पूरै फ्लप नै रह्यो। श्रीकर भरत (१६ बलमा ९ रन), ग्लेन म्याक्सवेल (१८ बलमा १५) र एबी डिभिलियर्स (९ बलमा ११ रन) बनाए आउट भए। मध्यक्रम नचल्नु पनि आरसीबीको हारको कारण बन्यो।
२. सुनिल नारायणको अलराउन्ड प्रदर्शन
कोलकाता नाइट राइडर्सका लागि सुनिल नारायणले अलराउन्ड प्रदर्शन गरे। उनले बलिङ र ब्याटिङमा महत्वपूर्ण योगदान दिए।
नारायणले ४ ओभरमा २१ रन दिएर महत्वपूर्ण ४ विकेट लिए। उनले श्रीकर भारत, विराट कोहली, ग्लेन म्याक्सवेल र एबी डिभिलियर्सको महत्वपूर्ण विकेट लिए। एक ब्याट्सम्यानको रुपमा उनले १५ बलमा ३ छक्काको मद्दतमा २६ रन बनाए।
१. विराट कोहलीको खराब कप्तानी
१३९ रनको लक्ष्य पछ्याएको केकेआरविरुद्ध आरसीबीलाई सुवातमै विकेट चाहिएको थियो। तर त्यो हुन सकेन। स्पिनरले पहिलो पारीमा धेरै राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसैले विराट कोहलीले सुरुवातमै आफ्नो स्पिनरहरुको राम्रो प्रयोग गर्नेछन् भन्ने आश गरिएको थियो। तर, यो हुन सकेन। युजवेन्द्र चहललाई धेरै ढिलो बलिङमा ल्याइयो।
युजवेन्द्र चहल र हर्षल पटेलले राम्रो बलिङ गरे। तर, उनीहरुलाई अन्य बलरले साथ दिएनन्। शाहबाज अहमदले अघिल्ला म्याचमा राम्रै बलिङ गरिरहेका थिए। तर, यस खेलमा उनलाई एक ओभर पनि बलिङ गर्न दिइएन।
नारायण ब्याटिङ गर्न आउँदा कोहलीले डान क्रिष्टियनलाई बलिङ गर्न लगाए। त्यो निर्णय महँगो साबित भयो। क्रिष्टियनको ओभरमा नारायणले ३ छक्का प्रहार गरे। कोहलीको खराब कप्तानी पनि हारको कारण बन्यो।
डिभिलियर्सले अचानक सबै क्रिकेटबाट संन्यास लिएपछि यस्तो भन्छन् म्याक्सवेल
यी भारतीय डाक्टर : जसले आईसीयूमा भर्ना भएका रिजवानलाई दुई दिनमै निको बनाए